Zucchini Mücver: iresiphi yemvelaphi yaseTurkey | Kitchen Recipes
Zucchini Mücver: iresiphi yemvelaphi yaseTurkey
UMaria vazquez | | Amangenelo ashushu
I-mücver ziifritters zesintu kwisidlo saseTurkey. Ngokuqhelekileyo zilungiswe kunye ne-zucchini ezinqunqiweyo njengesithako esiphambili kwaye ziyindlela ekhethekileyo yokubonisa le mifuno ngendlela ekhangayo etafileni. Babonakala ngathi ngumqali omnandi weKrisimesi kum, akunjalo?
Oku kutya okuqhotsiweyo kudla ngokuba netswele, ikonofile, umgubo, umngxuma kunye nedile kwaye ezo, kunye notshintsho oluncinci, endiye ndasebenzisa ukuzilungiselela. Zicrispy ngaphandle kwaye ithambile ngaphakathi. Ukufumana loo nto i-crunchy touch isitshixo kwezi fries kwaye kukho iingcebiso ezimbini kule nto: khupha i-zucchini kakuhle kwaye uyifake kwioli encinci kunye nobushushu obuphakathi.
Unokuzibonisa etafileni njengoko kunjalo okanye uhamba nesosi. Ndicinga ukuba kwitafile yeKrisimesi ebonisa isosi enye okanye ezimbini ngezi zinto ziya kunika ukubaluleka kwesi siqalisi. Into yesiNtu kukukhonza nge isosi iyogathi kodwa ndiyawuthanda umbono wokubakhapha nawo a Isosi yeRomco. Ngaba uya kuba nobuganga bokuzenza?
IZucchini Mücver: Iifritters zesiko laseTurkey
½ itispuni yetyuwa
Onion itswele emhlophe
I-clove zegalikhi ze-2
D ithisipuni yedill
Amaqanda ama-1 uL
2 amacephe omgubo wengqolowa
Ioli ye-olive enyulu yokuqhotsa
Siyinqumle iziphelo kwi-zucchini kwaye siyigcobe kwi-grater enqabileyo. Sifaka kwi-colander, yongeza ityuwa, xuba kwaye uvumele ukuba uphumle imizuzu engama-30-40 ukukhulula ulwelo.
Emva koko, siyayikhama ngezandla zethu kwaye siyifake kwindwangu ecocekileyo kwaye sijike ukugqiba ukususa ulwelo oluseleyo.
Gcoba kakuhle i-anyanisi kunye negalikhi kwaye udibanise ne-zucchini kwisitya esikhulu.
Kwesinye esincinci sixuba iqanda elibethiweyo kunye neziqholo kunye nomgubo.
Sithululela lo mxube kwi-zucchini kwaye udibanise. Kufuneka sifezekise umxube ohlala uhlangene kwaye ungachithi xa siwufaka kwioli.
Emva kokuba inhlama yenziwe, sibeka ioli epanini, ngokwaneleyo ukwenzela ukuba isiseko sayo sonke sihlanganiswe kakuhle, kwaye siyayitshisa ngokushisa okuphakathi.
Sithatha i-tablespoon yentlama kwaye siyifake kwioli, siyifake kancane ngepuni enye ukuze siyinike isimo se-pancake. Siyiyeka ibemdaka emva koko siyijike.
Senza zonke iifritters ngendlela efanayo, kwiibhetshi ezintathu okanye ezine.
Njengoko zimdaka, siyazikhupha kwaye sizibeke, ngaphandle kokuzifumba, kwi-rack enephepha lasekhitshini ukufunxa amanqatha angaphezulu.
Sisebenzela iimücver zezucchini ezisanda kwenziwa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: yokuqalisa » Abahlobo » Amangenelo ashushu » Zucchini Mücver: iresiphi yemvelaphi yaseTurkey
I-Hake in sauce: iresiphi ekhawulezayo yeKrisimesi